မုန်လာဥ၊ ကြက်ဥနဲ့ ကော်ဖီ - Real Gaming
မုန်လာဥ၊ ကြက်ဥနဲ့ ကော်ဖီ
အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ အမေထံကိုသွားပြီး ဆိုးဝါးလှတဲ့ သူမဘဝအကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောဆိုနေခဲ့တယ်..။ သူမဟာ ဒီ လောကဓံကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမှန်း မသိတော့ကြောင်းနဲ့ အရှုံးပေးချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတွေကိုပါ ပြောပြလျက်ရှိပါတယ်..။ သူမအတွက် ပြသနာတွေဟာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်ရှိလာတယ်..။ ဖြေရှင်းလို့ကို မပြီးနိုင်ဘူးဆိုပြီး ညည်းညူနေပြန်တယ်..။ သူမအမေဟာ သူမကို မီးဖိုချောင်ထဲသို့ ခေါ်သွားခဲ့တယ်…။
အိုး သုံးလုံးကို ရေထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်..။ ခဏအကြာမှာ ရေနွေးပွက်လာတော့ သူမ အမေဟာ ပထမအိုးထဲကို မုန်လာဥ၊ ဒုတိယအိုးထဲကို ကြက်ဥနဲ့ တတိယအိုးထဲကို ကော်ဖီမှုန့်တွေ အသီးသီးထည့်လိုက်တယ်..။ သူမဟာ သမီးဖြစ်သူကို မိနစ်၂၀လောက်ထိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်စေပြီး အဲ့ဒီနောက်မှာ မီးဖိုက မီးကို ငြိမ်းလိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ ပထမအိုးထဲကနေ မုန်လာဥကို ထုတ်ပြီး ပန်းကန်လုံးထဲထည့်လိုက်တယ်…။ ပြီးတော့ ကြက်ဥ။ နောက်ဆုံး ကော်ဖီ တို့ကို ခွက်ထဲထည့်ထားလိုက်တယ်..။
ပြီးတော့ သူမ သမီးဘက်ကိုလှည့်ပြီး… “ကဲ… သမီး… ဘာတွေ့လဲ..အမေ့ကို ပြော…” “မုန်လာဥ၊ ကြက်ဥနဲ့ ကော်ဖီခွက်လေ အမေရဲ့…” လို့ သမီးဖြစ်သူက ပြန်ဖြေတယ်..။ အမေဖြစ်သူက သမီးကို မုန်လာဥကို ကိုင်ကြည့်ပါလို့ ပြောလိုက်တယ်..။ သူမဟာ ပျော့ပျောင်းနေတဲ့ မုန်လာဥကို သတိပြုမိလိုက်တယ်..။ ကြက်ဥပြုတ်ကိုလည်း အခွံနွှာလိုက်တဲ့အခါမှာ မကျတ် တကျတ် ဖြစ်နေတဲ့ ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ကော်ဖီ တစ်ခွက်ကိုလည်း မြည်းကြည့်ဖို့ပြောတဲ့အတွက် သူမ တစ်ငုံသောက်ကြည့် လိုက်တယ်.။
သူမဟာ အမေဖြစ်သူ ဘာလို့ ဒီလိုတွေ လုပ်ခိုင်းနေလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်တာနဲ့ပဲ “အမေ… ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သမီးတော့ နားမလည်တော့ဘူး..” “ဒီ မုန်လာဥ၊ ကြက်ဥ၊ ကော်ဖီမှုန့်ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းသုံးမျိုးလုံးဟာ တူညီတဲ့ ရေနွေးဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ကြတယ်..ဒါပေမယ့် သူတို့ အပေါ် သက်ရောက်ပုံခြင်း ကျတော့ မတူခဲ့ဘူး..။ မုန်လာဥဟာ ရေနွေးနဲ့ မထိခင် သန်မာပြီး မာကျောခဲ့တယ်..။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးနဲ့ထိပြီး အခါမှာ လုံးဝကို ပျော့သွားခဲ့တယ်..။ ကြက်ဥဆိုတာ အရမ်းကို နူးညံ့တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် သူကျတော့ ရေနွေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ ပိုပြီး သန်မာ လာခဲ့တယ်..။
ကော်ဖီမှုန့်တွေကတော့ အရမ်းကို လိမ္မာပါးနပ်တယ်..။ သူတို့ဟာ ရေနွေးနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း သူတို့ပါ အရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်..” “သမီးက ဘယ်ဟာလဲ…… ရေနွေးနဲ့တူတဲ့ လောကဓံက ကိုယ့်အပေါ် သက်ရောက်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ…? မုန်လာဥလား.. ကြက်ဥလား.. ကော်ဖီမှုန့်လား…ကိုယ်ဟာဘာလဲ ဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားပါ.. လောကဓံကို အရှုံးပေးပြီး ပျော့ပြောင်းသွားတဲ့ မုန်လာဥ လား… ဒါမှမဟုတ် လောကဓံကြောင့်ပဲ ပိုမိုသန်မာလာတဲ့ ကြက်ဥလား… ဖြစ်လေရာ ဘဝမှာ ပျော်နေတတ်တဲ့ ကော်ဖီမှုန့်ပဲလား…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်ပါ…..” ဒီ ဝတ္တုတိုလေးက ဒီလောက်ပါပဲ…။ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်..။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင့်ကိုယ်တိုင် ဘာနဲ့ တူလဲလို့ စဉ်းစားမိသလဲ… မုန်လာဥလား..၊ ကြက်ဥလား.. ၊ ကော်ဖီလား….။
မုနျလာဥ၊ ကွကျဥနဲ့ ကျောဖီ
အမြိုးသမီးငယျ တဈဦးဟာ သူမရဲ့ အမထေံကိုသှားပွီး ဆိုးဝါးလှတဲ့ သူမဘဝအကွောငျးကို ရငျဖှငျ့ပွောဆိုနခေဲ့တယျ..။ သူမဟာ ဒီ လောကဓံကို ဘယျလိုရငျဆိုငျရမှနျး မသိတော့ကွောငျးနဲ့ အရှုံးပေးခငျြစိတျ ဖွဈပျေါနကွေောငျးတှကေိုပါ ပွောပွလကျြရှိပါတယျ..။ သူမအတှကျ ပွသနာတှဟော တဈခုပွီးတဈခု ရောကျရှိလာတယျ..။ ဖွရှေငျးလို့ကို မပွီးနိုငျဘူးဆိုပွီး ညညျးညူနပွေနျတယျ..။ သူမအမဟော သူမကို မီးဖိုခြောငျထဲသို့ ချေါသှားခဲ့တယျ…။
အိုး သုံးလုံးကို ရထေညျ့ပွီး မီးဖိုပျေါတငျထားလိုကျတယျ..။ ခဏအကွာမှာ ရနှေေးပှကျလာတော့ သူမ အမဟော ပထမအိုးထဲကို မုနျလာဥ၊ ဒုတိယအိုးထဲကို ကွကျဥနဲ့ တတိယအိုးထဲကို ကျောဖီမှုနျ့တှေ အသီးသီးထညျ့လိုကျတယျ..။ သူမဟာ သမီးဖွဈသူကို မိနဈ၂၀လောကျထိုငျပွီး စောငျ့ကွညျ့စပွေီး အဲ့ဒီနောကျမှာ မီးဖိုက မီးကို ငွိမျးလိုကျတယျ..။ ပွီးတော့ ပထမအိုးထဲကနေ မုနျလာဥကို ထုတျပွီး ပနျးကနျလုံးထဲထညျ့လိုကျတယျ…။ ပွီးတော့ ကွကျဥ။ နောကျဆုံး ကျောဖီ တို့ကို ခှကျထဲထညျ့ထားလိုကျတယျ..။
ပွီးတော့ သူမ သမီးဘကျကိုလှညျ့ပွီး… “ကဲ… သမီး… ဘာတှလေဲ့..အမကေို့ ပွော…” “မုနျလာဥ၊ ကွကျဥနဲ့ ကျောဖီခှကျလေ အမရေဲ့…” လို့ သမီးဖွဈသူက ပွနျဖွတေယျ..။ အမဖွေဈသူက သမီးကို မုနျလာဥကို ကိုငျကွညျ့ပါလို့ ပွောလိုကျတယျ..။ သူမဟာ ပြော့ပြောငျးနတေဲ့ မုနျလာဥကို သတိပွုမိလိုကျတယျ..။ ကွကျဥပွုတျကိုလညျး အခှံနှာလိုကျတဲ့အခါမှာ မကတျြ တကတျြ ဖွဈနတေဲ့ ကွကျဥပွုတျ တဈလုံးနဲ့ နောကျဆုံး ကျောဖီ တဈခှကျကိုလညျး မွညျးကွညျ့ဖို့ပွောတဲ့အတှကျ သူမ တဈငုံသောကျကွညျ့ လိုကျတယျ.။
သူမဟာ အမဖွေဈသူ ဘာလို့ ဒီလိုတှေ လုပျခိုငျးနလေဲဆိုတာ နားမလညျနိုငျတာနဲ့ပဲ “အမေ… ဘာကိုဆိုလိုမှနျး သမီးတော့ နားမလညျတော့ဘူး..” “ဒီ မုနျလာဥ၊ ကွကျဥ၊ ကျောဖီမှုနျ့ဆိုတဲ့ ပစ်စညျးသုံးမြိုးလုံးဟာ တူညီတဲ့ ရနှေေးဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ထိတှခေဲ့ကွတယျ..ဒါပမေယျ့ သူတို့ အပျေါ သကျရောကျပုံခွငျး ကတြော့ မတူခဲ့ဘူး..။ မုနျလာဥဟာ ရနှေေးနဲ့ မထိခငျ သနျမာပွီး မာကြောခဲ့တယျ..။ ဒါပမေယျ့ ရနှေေးနဲ့ထိပွီး အခါမှာ လုံးဝကို ပြော့သှားခဲ့တယျ..။ ကွကျဥဆိုတာ အရမျးကို နူးညံ့တဲ့ အရာတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့ သူကတြော့ ရနှေေးနဲ့တှတေဲ့အခါမှာ ပိုပွီး သနျမာ လာခဲ့တယျ..။
ကျောဖီမှုနျ့တှကေတော့ အရမျးကို လိမ်မာပါးနပျတယျ..။ သူတို့ဟာ ရနှေေးနဲ့တှပွေီ့းနောကျပိုငျး သူတို့ပါ အရညျအဖွဈ ပွောငျးလဲပဈလိုကျတယျ..” “သမီးက ဘယျဟာလဲ…… ရနှေေးနဲ့တူတဲ့ လောကဓံက ကိုယျ့အပျေါ သကျရောကျလာပွီဆိုရငျ ဘယျလိုတုံ့ပွနျမလဲ…? မုနျလာဥလား.. ကွကျဥလား.. ကျောဖီမှုနျ့လား…ကိုယျဟာဘာလဲ ဆိုတာကို သခြောစဉျးစားပါ.. လောကဓံကို အရှုံးပေးပွီး ပြော့ပွောငျးသှားတဲ့ မုနျလာဥ လား… ဒါမှမဟုတျ လောကဓံကွောငျ့ပဲ ပိုမိုသနျမာလာတဲ့ ကွကျဥလား… ဖွဈလရော ဘဝမှာ ပြျောနတေတျတဲ့ ကျောဖီမှုနျ့ပဲလား…
ကိုယျ့ဟာကိုယျ စဉျးစားကွညျ့ပါ…..” ဒီ ဝတ်တုတိုလေးက ဒီလောကျပါပဲ…။ စဉျးစားစရာတှေ အမြားကွီးပါဝငျပါတယျ..။ သငျကိုယျတိုငျရော သငျ့ကိုယျတိုငျ ဘာနဲ့ တူလဲလို့ စဉျးစားမိသလဲ… မုနျလာဥလား..၊ ကွကျဥလား.. ၊ ကျောဖီလား….။